ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရင်း မေတ္တာမျှခဲ့ကျတဲ့ ကမ္ဘာကျော် စုံတွဲများ။ – SoShwe
Home/Entertainment/ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရင်း မေတ္တာမျှခဲ့ကျတဲ့ ကမ္ဘာကျော် စုံတွဲများ။
HOLLYWOOD, CA - DECEMBER 15: Actors Ryan Reynolds (L) and Blake Lively pose foraphoto as Ryan Reynolds is honored with star on the Hollywood Walk of Fame on December 15, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရင်း မေတ္တာမျှခဲ့ကျတဲ့ ကမ္ဘာကျော် စုံတွဲများ။
admin November 21, 2021	Entertainment, LifeStyle Leaveacomment
၁။ Kit Harington & Rose Leslie
ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ – Game of Thrones (2011 – 2019)
HBO ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ Game of Thrones (Season – 2) မှာ တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၈ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် စကော့တလန်မှာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ပါတယ်။
၂။ Ryan Reynolds & Blake Lively
ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်း – Green Lantern (2011)
နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Ryan နဲ့ Blake ကတော့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် Green Lantern ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေရင်း ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုအချိန်က Ryan မှာ Scarlett Johansson နဲ့ လက််ထပ်ထားတုန်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာတော့ ကွာရှင်းခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာတော့ Blake နဲ့ လူသိရှင်ကြား လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး သားသမီးနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။
၃။ Daniel Craig & Rachel Weisz
ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်း – Dream House (2011)
Daniel နဲ့ Rachel တို့ဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မချစ်ကြိုက်ခင်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် နှစ်အတော်ကြာ နေလာခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ ယခင်က တစ်ကြိမ်စီ လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်သလို အရင်အိမ်ထောင်နဲ့ သားသမီးတစ်ဦးစီ ရှိကျသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ရင်သွေးလေးကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
၄။ Ryan Gosling & Eva Mendes
ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်း – The Place Beyond The Pines (2012)
Ryan နဲ့ Eva တို့ဟာ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ထိုအချိန်ကတည်းက တွဲခုတ်ခဲ့ကြကာ ကလေးနှစ်ဦး ရရှိထားပါတယ်။
၅။ Emma Stone & Andrew Garfield
ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်း – The Amazing Spider-Man (2012)
သူတို့နှစ်ဦးဟာ The Amazing Spider-Man မှာ Peter နဲ့ Mary အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိ လူသိရှင်ကြား တွဲခုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၆။ Miley Cyrus & Liam Hemsworth
ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်း – The Last Song (2010)
Miley နဲ့ Liam တို့ဟာ The Last Song ကို ရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်း ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပြီး ထိုစဉ်က သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေသာ ရှိကြပါသေးတယ်။
၇။ Dev Patel & Frieda Pinto
ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်း – Slumdog Millionaire (2008)
Oscar ဆုရရှိခဲ့တဲ့ Slumdog Millionaire ကိုရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်း ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပြီး (၇) နှစ်ကြာ လက်တွဲလာခဲ့ကာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။
၈။ Kristen Stewart & Robert Pattinson
ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်း – Twilight (2008)
စိတ်အစွဲအလန်းကြီးတဲ့ သူတို့စုံတွဲကတော့ အချိ်န်ရဲ့စမ်းသပ်ခြင်းကို မခံစားနိုင်ဘဲ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။
၉။ Jenna Dewan & Channing Tatum
ရိိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်း – Step Up (2006)
သူတို့နှစ်ဦးဟာ Step Up ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးရင်း စတွေ့ခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ (၉) နှစ်ကြာ လက်တွဲပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာတော့ နှစ်ဦးသား ကွာရှင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးရင္း ေမတၱာမွ်ခ့ဲက်တ့ဲ ကမာၻေက်ာ္ စုံတြဲမ်ား။
ရိုက္ကူးခ့ဲတ့ဲဇာတ္လမ္းတြဲ – Game of Thrones (2011 – 2019)
HBO ကေန ထုတ္လႊင့္ျပသခ့ဲတ့ဲ Game of Thrones (Season – 2) မွာ ေတြ႕ရွိခ့ဲၾကၿပီး ၂၀၁၈ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ စေကာ့တလန္မွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခ့ဲပါတယ္။
ရိုက္ကူးခ့ဲတ့ဲဇာတ္လမ္း – Green Lantern (2011)
နာမည္ႀကီးရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ Ryan နဲ႕ Blake ကေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ Green Lantern ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေနရင္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္က Ryan မွာ Scarlett Johansson နဲ႕ လက္္ထပ္ထားတုန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကြာရွင္းခ့ဲပါတယ္။ ထုိ႕ေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Blake နဲ႕ လူသိရွင္ၾကား လက္ထပ္ခ့ဲၾကၿပီး သားသမီးႏွစ္ဦး ထြန္းကားခ့ဲပါတယ္။
ရိုက္ကူးခ့ဲတ့ဲဇာတ္လမ္း – Dream House (2011)
Daniel နဲ႕ Rachel တို႕ဟာ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး မခ်စ္ႀကိဳက္ခင္တုန္းက သူငယ္ခ်င္းေတြအျဖစ္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ေနလာခ့ဲၾကပါတယ္။ သူတို႕ႏွစ္ဦးစလုံးဟာ ယခင္က တစ္ႀကိမ္စီ လက္ထပ္ခ့ဲၿပီးသားျဖစ္သလို အရင္အိမ္ေထာင္နဲ႕ သားသမီးတစ္ဦးစီ ရွိက်သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က လက္ထပ္ခ့ဲၾကၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ ပထမဦးဆုံး ရင္ေသြးေလးကို ေမြးဖြားခ့ဲပါတယ္။
ရိုက္ကူးခ့ဲတ့ဲဇာတ္လမ္း – The Place Beyond The Pines (2012)
Ryan နဲ႕ Eva တို႕ဟာ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ရိုက္ကူးခ့ဲတ့ဲ ရုပ္ရွင္ကားမွာ ေတြ႕ဆုံခ့ဲၾကၿပီး ထိုအခ်ိန္ကတည္းက တြဲခုတ္ခ့ဲၾကကာ ကေလးႏွစ္ဦး ရရွိထားပါတယ္။
ရိုက္ကူးခ့ဲတ့ဲဇာတ္လမ္း – The Amazing Spider-Man (2012)
သူတို႕ႏွစ္ဦးဟာ The Amazing Spider-Man မွာ Peter နဲ႕ Mary အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရင္း ေတြ႕ရွိခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္အထိ လူသိရွင္ၾကား တြဲခုတ္ခ့ဲၾကပါတယ္။
ရိုက္ကူးခ့ဲတ့ဲဇာတ္လမ္း – The Last Song (2010)
Miley နဲ႕ Liam တို႕ဟာ The Last Song ကို ရိုက္ကူးေနစဥ္အတြင္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခ့ဲၾကၿပီး ထိုစဥ္က သူတို႕ႏွစ္ဦးစလုံးဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေတြသာ ရွိၾကပါေသးတယ္။
ရုိက္ကူးခ့ဲတ့ဲဇာတ္လမ္း – Slumdog Millionaire (2008)
Oscar ဆုရရွိခ့ဲတ့ဲ Slumdog Millionaire ကိုရိုက္ကူးေနစဥ္အတြင္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခ့ဲၾကၿပီး (၇) ႏွစ္ၾကာ လက္တြဲလာခ့ဲကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းခြဲခ့ဲၾကပါတယ္။
ရိုက္ကူးခ့ဲတ့ဲဇာတ္လမ္း – Twilight (2008)
စိတ္အစြဲအလန္းႀကီးတ့ဲ သူတို႕စုံတြဲကေတာ့ အခ်ိ္န္ရဲ႕စမ္းသပ္ျခင္းကို မခံစားႏိုင္ဘဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လမ္းခြဲခ့ဲၾကပါတယ္။
ရိုိက္ကူးခ့ဲတ့ဲဇာတ္လမ္း – Step Up (2006)
သူတို႕ႏွစ္ဦးဟာ Step Up ဆိုတ့ဲ ဇာတ္ကားကိုရိုက္ကူးရင္း စေတြ႕ခ့ဲၾကၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ လက္ထပ္ခ့ဲၾကပါတယ္။ (၉) ႏွစ္ၾကာ လက္တြဲၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာေတာ့ ႏွစ္ဦးသား ကြာရွင္းလိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ့ဲပါတယ္။
Previous စိတ်ဖိစီးမှုတွေမှ သက်သာလာစေရန် မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လို ပြုမူ နေထိုင်မလဲ ? ? ?
Next ကျန်းမာရေးအတွက် တွဲဖက်စားသုံးသင့်သော အစားအစာများ။
ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ဆော်ပေါ်လိုမြို့၌ နေထိုင်သည့် အသက် (၄၈) နှစ်အရွယ် Valdir Segato ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ပိန်ပိန်ပါးပါးကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်မှ ကြီးမားသည့် ကြွက်သားထုထည်များ ပိုင်ဆိုင်ရေးအတွက် Synthol …